JINGHPAW KASA: ဗမာစစ်တပ် လူနေရွာအတွင်းသို့ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်
နိုဝင်ဘာ (၇) ဗုဒဟူး
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) နယ်မြေဖြစ်သော မြစ်ကြီးနား - ဗန်းမော်လမ်း ဂန်ဒေါင်ယန် အခြေစိုက် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ် ခမရ (၃၁၈) မှ နိုင်ဝင်ဘာ (၆) ရက်မနက် (၆း၀၀) နာရီအချိန်ခန့်တွင် အင်ပေါန်ရွာနှင့် ဂန်ဒေါင်ဒူ ရွားများအတွင်သုိ့ (၁၂၀မမ) လက်နက်ကြီးဖြင့် (၄) ကြိမ် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး ဗမာအစိုးရသည် ဂန်ဒေါင်ယန်အရှေစိုက် ဗမာစစ်တပ်ကို စစ်တပ်အပြောင်းအရွှေ့လုပ်ရန် မြစ်ကြီးနားဘက်မှ လက်နက်၊ ရိက္ခာ၊ စစ်အင်အား အလုံးအရင်းဖြင့် ချီတက်လာနေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Burmese Government light infantry unit (318) opened fire (4) times with 120mm artillery weapon to the N Pau and Gang Dau villages at early morning 6:00 AM on 6th November, according to the KIA front-line officer. Then, the other Burmese troops came with many weapons, soldiers and ration to change the place of unit (318).
Angry dog.Be ware of mad dog.